Covid 19 နှင့် Social Distancing | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ်, သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး Covid 19 နှင့် Social Distancing
Social Distancing ဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒေသတစ်ခုကနေ တစ်ခု၊ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုကနေ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကို သွားလာမှု မရှိစေဘဲ ကိုယ်နေထိုင်ရာအိမ်တွင်းမှာ နေထိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။
မနေ့က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဠာနကနေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ လူနာ (၂) ဦးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာ အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဒီရောဂါကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနည်းအောင် လုပ်ဖို့က အဓိကဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလို နိုင်ငံတွင်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ Social Distancing ပါပဲ။
ဒါဖြင့် Social Distancing ဆိုတာဘာလဲ?
Social Distancing ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရသူတွေမှအပ ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်နေထိုင်ရာအိမ်တွင်းမှာပဲ နေထိုင်ဖို့ပါပဲ။ ဒီလို Covid -19 ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ခရီးသွားတာမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာမျိုးတွေ၊ Supermarket တွေမှာ မလိုအပ်ဘဲ ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်းနဲ့ လူအများအပြားနဲ့ ထိတွေ့တာမျိုးတွေ၊ အစရှိသဖြင့် လူစုလူဝေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေမှန်သမျှကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြဉ်ဖို့ပါပဲ။
ဒါ့အပြင် တခြားနိုင်ငံကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ၃ပေအကွာမှာ နေထိုင်စားသောက်ဖို့ နဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အနည်းဆုံး ၁၄ ရက် နီးနီးကပ်ကပ်မနေဖို့ဆိုတာမျိုးတွေကလဲ Social Distancing ဆိုတဲ့အထဲမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ကဲ Social Distancing လုပ်လိုက်ပါပြီတဲ့။ လူတိုင်းက အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲ ဂူအောင်းပြီး Quarentine လုပ်မယ်ဆိုရင် အားသာချက်ကတော့ ကိုယ့်မိသားစုကိုလဲ အချိန်ပေးနိုင်မယ်၊ အေးအေးဆေးဆေး နားနေချိန်လဲရတယ်စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်ကာလမှာ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေ၊ အိမ်ထောင်သည်တွေအနေနဲ့လဲ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို အချိန်ပေးနိုင်မယ်၊ နှစ်ယောက်သားတူတူ အချိန်ကုန်ဆုံးခွင့်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီတော့ သိလိုရာမေးရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Social Distancing ကာလမှာ အချိန်တူတူကုန်ဆုံးပြီး ချစ်ရည်လူးကြမယ့် သူတွေအတွက် အချိန်မတိုင်ခင်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရမသွားဖို့ကလဲ အရေးကြီးပြန်ရော! ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အတူနေတဲ့အခါတိုင်း Lydia ရဲ့ Rosa၊ Clair ၊ Lacta(နို့တိုက်မိခင်များအတွက်) နဲ့ Fine တို့လို သားဆက်ခြားသောက်ဆေးတွေကို သောက်သုံးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ သောက်ဆေးသောက်ဖို့အဆင်မပြေချိန်မှာလဲ အမျိုးသားတွေက Kiss လိုမျိုး ကွန်ဒုံးကို သုံးပြီး အတူချစ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာ…
Kiss ကွန်ဒုံးတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာဆို Rgo 47 နဲ့ Shop.com.mm ကနေမှာရင် အပြင်ထွက်စရာမလို အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးမှာဆိုတော့ အောက်က လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး ခုပဲ မှာလိုက်ပါတော့ဗျို့!